ဆောင်းရာသီမှာ Outdoor Camping လုပ်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက ဘာတွေလဲ။
ရွက်ဖျင်တဲများ၊ အိပ်အိတ်များနှင့် အစိုဓာတ်ခံ ဖျာများ။သုံးပိုင်းတပ်စခန်းချခြင်းဟု လူသိများသော ၎င်းတို့သည် အအေးဒဏ်ကို တွန်းလှန်ရာတွင် အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။၎င်းတို့၏ ညွှန်းကိန်းများ၊ ကန့်သတ်ချက်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည် စသည်တို့ကို ဤနေရာတွင် မိတ်ဆက်မပြသော်လည်း ၎င်းတွင် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်သည့် အချို့သော ကဏ္ဍများအကြောင်းကိုသာ ဆွေးနွေးပါ။
အပြင်မှာ စခန်းချတဲ့အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် အချက်အချို့ရှိပါတယ်။
Soft Roof Top Tent ပေးသွင်းသူအနေဖြင့် သင်နှင့် မျှဝေပါ။ကွန်ကရစ်တောထဲမှာနေထိုင်သူတွေဟာ အမြဲလိုလို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမှုတွေ ခံစားရတတ်တာကြောင့် အားလပ်ရက်တွေမှာ တောထဲမှာ စခန်းချပြီး သဘာဝနဲ့ နီးစပ်တဲ့ Car Roof Tent တွေ ပိုများလာတာကြောင့် စခန်းချခြင်းရဲ့ အထူးခြားဆုံးကတော့ အရသာရှိတဲ့ ဟင်းလျာတွေကို မြည်းစမ်းရင်း...
Trailer vs Rooftop Tent- ဘယ်တစ်ခုက သင့်အတွက် သင့်တော်လဲ။
စခန်းချခြင်းသည် ယခုအချိန်တွင် ဒေါသတကြီးဖြစ်နေပေသည်၊ ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။- ခေတ်ဆန်သော ဝယ်လိုအားများ ပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှ စျေးကွက်တွင် ကမ်းလှမ်းမှု အများအပြား ထွက်ပေါ်လာသည်။ဘီးများပေါ်တွင် နေရာထိုင်ခင်းအတွက် ရွေးချယ်စရာများစာရင်းသည် ပို၍ရှည်လျားလာကာ၊ သင့်ကိုယ်သင် သဘာဝကျကျ တွေးတောနေမိလိမ့်မည်...
Aerodynamic Rooftop Tent သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပိတ်သည့်အခါတွင် 6.5 လက်မသာ မြင့်သော Arcadia သည် အထက်ဖော်ပြပါ Low-Pro ဟုခေါ်တွင်သော အပါးလွှာဆုံးမော်ဒယ်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင် အပါးလွှာဆုံးမော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ဤလေခွင်းအသွင်သဏ္ဌာန်သည် ဓာတ်ငွေ့မိုင်အကွာအဝေးအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် လေတိုက်သည့်အသံကို သေချာပေါက် လျှော့ချပေးကာ ၎င်းသည် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုတွင် ကြီးမားသောခြားနားချက်ဖြစ်စေနိုင်သည်...
Car camping အမိုးတဲအသေးစိတ်
Car camping roof tent ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Hard shell roof top tent သည် camping နှင့် 4WD adventure အားလပ်ရက်များကိုကြည့်ရှုရန် နည်းလမ်းအသစ်ကို ပေးပါသည်။ပိုကြီးသော အတွင်းပိုင်းနေရာဖြင့် PLAYDO သည် လူကြီးနှစ်ဦးနှင့် ကလေးတစ်ဦးအတွက် အိပ်ရန်နေရာပေးသည်။PLAYDO အမိုးတဲတွင် တံခါးနှစ်ပေါက်ပါရှိပြီး...
Awning Fabric ရေစိုခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက် – ၎င်းသည် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။
21-12-09 ရက်နေ့တွင် admin မှ
သင့်ကား၏ ကာဗာကို တပ်ဆင်သည့်အခါ မိုးမရွာစေရန် မျှော်လင့်ထားပြီး ၎င်းသည် ရေစိုခံရန် လိုအပ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။“ရေစိုခံခြင်း” က ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။တကယ်တော့ ရေစိုခံတာ ဘာမှမပါပါဘူး – ရေကို လုံလုံလောက်လောက် တွန်းလှန်ပြီး ဖြတ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်...
အမိုက်စား Camping Tips5ခုက ဘာတွေလဲ။
Soft Roof Top Tent ပေးသွင်းသူအနေဖြင့် သင်နှင့် မျှဝေပါ။ကွန်ကရစ်တောထဲတွင်နေထိုင်သူများသည် အမြဲလိုလို ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် ဖိနှိပ်ခြင်းကို ခံစားရသောကြောင့် အားလပ်ရက်များတွင် တောထဲတွင် စခန်းချကာ သဘာဝနှင့် နီးကပ်စွာ သွားလာခြင်းကို ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။စခန်းချခြင်း၏ အဓိကအချက်မှာ လှပသော မြက်ခင်းပြင်တွင် အရသာရှိသော ဟင်းလျာများကို စားသုံးရန်ဖြစ်သည်။
အမိုးတဲနှင့် သာမန်တဲကြား ကွာခြားချက်
သာမာန် စခန်းချတဲများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရီးစဉ်အတွက် အိပ်စက်ခြင်း လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြောင်း လူအချို့ နားမလည်နိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့် အဘယ်ကြောင့် Roof Tent ကို ဝယ်ပါသနည်း။Car Roof Tent Maker တစ်ယောက်အနေနှင့်၊ လူတိုင်းအတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရအောင်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ရိုးရိုးရွက်ဖျင်တဲတွေ ဆောက်ရာမှာ ဘေ့စ်တီးဖို့ စခန်းချဖို့ လိုအပ်တယ်။
အကောင်းဆုံး Softshell Roof Top Tents 10 ခု- သင်သိလိုသမျှ
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး soft shell roof top tent တွေ စာရင်းလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။softshell RTT တစ်ခုစီကို ထိတွေ့လိုက်သည်နှင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အရွယ်အစား၊ ဈေးနှုန်းနှင့် အခြားအရာများကို ကျော်သွားပါမည်။အကြိုက်ဆုံး soft tops စာရင်းထဲမှာ၊ ကျယ်ပြန့်တဲ့ features နဲ့ dura ပါ၀င်တဲ.
စျေးကွက်ရှိ အကောင်းဆုံး ရေခဲငါးဖမ်းတဲများထဲမှ7ခု
ရေခဲငါးဖမ်းခြင်းသည် အလွန်အေးသော ရာသီဥတုတွင် အပြင်ထွက်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ဒါကိုဖြေရှင်းရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ တဲအမိုးအကာတစ်ခုရရှိရန်ဖြစ်သည်။သင်၏အမိုးအကာ၏အကာအကွယ်အတွင်းတွင်၊ သင်သည်တစ်နေ့တာလုံးသက်တောင့်သက်သာငါးဖမ်းနိုင်သည်။သင့်အား နွေးထွေးမှုပေးမည့် နေရာများစွာရှိသော်လည်း သင့်အား နွေးထွေးမှုပေးမည့် အကြီးစားတစ်ခုကို ရှာတွေ့ရန် ကူညီပေးရန် ...
Rooftop Tent မဝယ်ခင် ဘာတွေသိထားသင့်လဲ။
လူမှုရေးအရ ခပ်ခွာခွာနေခြင်းသည် လိုအပ်ချက်တစ်ခုမဖြစ်မီ ကြာမြင့်စွာကတည်းက ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် လူ့ယဉ်ကျေးမှုမှလွတ်မြောက်ရန် ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။ဤအောင်မြင်ရန် နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ဖြစ်သည့် ကုန်းတွင်းဆင်းခြင်း နှင့် off-grid camping တို့သည် ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။မင်းအိမ်ကနေ ထွက်သွားရတာ ပျော်စရာကောင်းပေမယ့် ဇယားကွက်က အဝေးကြီးသွားရတာ ရီမိုလို့ မဆိုလိုပါဘူး...
စခန်းချရာတွင် မီးဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု။
စခန်းချရန်အတွက် တောမီးကိုအသုံးပြုသည့်အခါ အောက်ပါသတိထားချက်များကို လိုက်နာနိုင်သည်- တောင်တက်ခြင်းနှင့် စခန်းချခြင်းမပြုမီ မီးဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို သိထားရန် အခြေအနေများစွာတွင်၊ ရှုခင်းသာနေရာများ သို့မဟုတ် တောင်တက်ဧရိယာများ၏ မန်နေဂျာများသည် မီးအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး လိုအပ်ချက်အချို့ကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့်၊ ကျရောက်တတ်တဲ့ရာသီတွေ...